လင်းနစ် - MYSTERY ZILLION
minthawtha August 2009 edited October 2009 in Networking ကျနော် linux အကြောင်းလေသိချင်လို့ပါ server တစ်လုံးမှာ linux နဲ ISA နဲဆိုရင် ဘယ် ဟက ပိုမြန်ပါသလဲ ခင်ဗျာ နောက်ပြီး ဘယ် ဟက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်လို့့ပါ :D:D:D:D မှတ်ချက်များ
saturngod August 2009 edited August 2009 Administrators အဲဒါကို MZ မှာ ဆွေးနွေးဘူးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာထက် ဘယ်ဟာကို ကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ အချက်က အဓိကျပါတယ်။ ISA ကျွမ်းရင် ISA သုံး။ Squid ကျွမ်းရင် Squid သုံးပေါ့။ တစ်ခုကနေ တစ်ခုပြောင်းရင်တော့ လေ့လာစရာလေးတွေက ရှိပါတယ်။ ISA နဲ့ Squid က မတူဘူးဗျ။ လေ့လာရတာ နည်းနည်းကွဲပြားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Linux သမားဆိုတော့ Squid ပိုကြိုက်တာပေါ့။ symbolbeta August 2009 edited August 2009 Registered Users ISA=Firewall+Web ProxySquid=Web Proxy minthawtha August 2009 edited August 2009 Registered Users linux is diffcult for me and how to learn pls :77::77::77: netlynker September 2009 edited September 2009 Registered Users I started with this website ( linuxhomenetworking.com ) phoethat September 2009 edited September 2009 Registered Users ကိုစေတန်..မသိလို့မေးပါရစေ.......................squid ကိုရော windows မှာသုံးလို့ရမရသိချင်ပါတယ်နောက်ပြီးconfiguration လုပ်ပုံလေးပါလိုချင်ပါတယ:77::77:် kokoye September 2009 edited September 2009 Registered Users symbolbeta;51618 said:ISA=Firewall+Web ProxySquid=Web Proxy
Squid= Web Proxy, Cacheiptables = Firewall kokoye September 2009 edited September 2009 Registered Users phoethat;57343 said:ကိုစေတန်..မသိလို့မေးပါရစေ.......................squid ကိုရော windows မှာသုံးလို့ရမရသိချင်ပါတယ်နောက်ပြီးconfiguration လုပ်ပုံလေးပါလိုချင်ပါတယ:77::77:်
Windows မှာ Squid သုံးနိုင်ပါတယ်။သို့သော် Linux မှာလို Process တွေ Module တွေသေသေချာချာ Detail ထိန်းဖို့ မလွယ်တဲ့အတွက်Windows မှာ ပိုလေးပါလမ့်မယ်။http://squid.acmeconsulting.it/ မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်Mark ပြောထားတဲ့ Step by step squid Config လေးကတော့ဒီနေရာမှာhttp://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=785Ubuntu အတွက် Squid Configuration လိုချင်ရင်တော့ DEB လုပ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်။MPT အတွက် Bagan အတွက် နှစ်မျိုးလုပ်ထားပါတယ်။(Click ပြီး Install လုပ်ရုံပဲ)နှစ်လိုင်းပေါင်းဖို့ကတော့ မစမ်းရသေးပါဘူး။Vyatta နဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပြောကြပါတယ်၊Proxy, Cache တွေ Load Balance တွေလုပ်ဖို့ အဓိကထားတာပါ။ Size က 200 Mb မပြည့်ပါဘူး။ VM Ware နဲ့စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ VM Ware ဖိုင်တန်းပြီး Download ဆွဲရုံပါပဲ၊ Cyberhack September 2009 edited September 2009 Registered Users သင်သည် ပြိုင်ကားမောင်းသူလား............. ကုန်တင်ကားမောင်းသူလား သိဖို့လိုပါတယ်......... ကျွမ်းကျင်ရာ မောင်းဖို့ပါပဲ......... အကုန်လုံးကတော့ အကောင်းဆုံးတွေချည်းပါပဲ............ သင်ကြိုက်ရာကောင်း၏ ဟီးဟီး yaeloeaye September 2009 edited September 2009 Registered Users ကိုစေတန်..မသိလို့မေးပါရစေ.................... ...squid ကိုရော windows မှာသုံးလို့ရမရသိချင်ပါတယ်နောက်ပြီးconfiguration လုပ်ပုံလေးပါလိုချင်ပါတယ:77::77:် __________________squid proxy server ဆိုတော cache လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ transparent ၇တယ်။ access and deny လည်းရတယ်။ multi instance လေး၇တဲ့ application တစ်ခုပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများ။ main server ကြိးတေမှာမြင်ရမှာပါ။ squid ကိုပဲ gateway အဖြစ်သုံးကြပါတယ်။ များအားဖြင့် networking နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဒါကို လုပ်ခိုင်းကြပါတယ်။ mpt က ADSL ကိုလည်း proxy server ခံချင်တယ်။ ipstar ကိုလည်း server ခံချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ ။ဒါကို သုံးနိုင်ပါတယ်။တစ်ချီု့အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ရုံးတွေ industry တွေ မှာ မလုပ်တတ်ကြလို့ squid ကို run နိုင်ဖို့အတွက် ပိုက််ဆံပေးပြိး လုပ်ခိုင်းရပါတယ်။ကျနော်ဒီနေရာမှာ မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့နည်းရယ် မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်။ အလွယ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် Software ပါ ရေးပေးထားပါတယ်။ start and stop လုပ်ရုံပါပဲ။ ဒီပို့စ်မှာတော့ manually လုပ်နည်းကို တစ်ဆင့်ချင်းပြောသွားပါ့မယ်။နောက်ပို့စတွေမှာ ကျနော်ကိိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ software ကို တင်ပေးပါ့မယ်။##########################################################squid installing and configuration by [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]#www.myanmarenginer.org#ရေခါး@MEF#############################################____________________________________________________________________________________________________ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Squid Installing and Configuration +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++___________________________________________________________________________________________________=========================================== Installation Squid Proxy Server===========================================ိdownload လုပ်၇န် squid.2.7 stable6version1. squid folder ကို အရင် နေရာချ။ c:\_Squid ။ space ခြားတဲ့ နေရာမှာ မထားပါနဲ့။ ဥပမာ (မသုံးရန်) c:\_my proxy\_squid ။2. etc folder ထဲမှ squid.conf.default ဖိုင်ကို ကော်ပီအရင်ပွားထားပြီးမှ squid.conf သို့ပြောင်း။3. etc folder ထဲမှ mime.conf.default ဖိုင်ကို ကော်ပီအရင်ပွားထားပြီးမှ mime.conf သို့ပြောင်း။3. etc folder ထဲမှ cachemgr.conf.default ဖိုင်ကို ကော်ပီအရင်ပွားထားပြီးမှ cachemgr.conf သို့ပြောင်း။squid.conf.default ==> squid.conf mime.conf.default ==> mime.conf cachemgr.conf.default ==> cachemgr.conf ------------------------------------------@creating swap folder--------------------------------------------4. var folder ထဲမှာ cache ဆိုပြီး ဖိုဒါဆောက်ပေး။=================================================== Configuration Squid proxy server==================================================== squid.conf ဖိုင်ကိုconfiguration စလုပ်။ # ကို ရှေ့က ခံထားရင် အဲဒါဟာ comment ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ effect မှ မရှိပါဘူး။-------------------------------@setting squid service port------------------------------------1. http_port ကို ထည့်ပါ။ squid က ဒီ port နဲ့ run နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ default ကတော့ format port [options] hostname:port example http_port 3128 ဒီအတိုင်း မထားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ 3128 နေရာမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ port ကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ http_port 3177LAN ကိုချိတ်ထားတဲ့ network card ရဲ့အိုင်ပီက 192.168.0.1 ဆိုရင်http_port 192.168.0.1:3177 ဆိုပြီးထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ security reson ပေါ့။-----------------------------------------@adding cache directory-----------------------------------------2. cache directory နေရာကို ညွှန်ပြ။ cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 100 16 256 ကဲ့သို့သော line ကို မိမိကွန်ပျုတာရှိ သက်ဆိုင်သော နေရာကို ပြောင်းပေး။100 နေရာသည် file system တွင် 100 mega bytes ယူကြောင်းကြေငြောခြင်းဖြစ်တယ်။ 16 ဖိုဒါဆောက်။ 256 sub folder ထပ်ဆောက်ကြောင်းပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်။ \_ ကို မသုံးပါနဲ့။ / ကို သုံးပါ။ ဥပမာ။ cache_dir C:/squid/var/cache သို့ပြောင်း။--------------------------------------------------@making access control lists (acl)--------------------------------------------3. acl (access contorl lists)ကို လုပ်ပေးရန်လိုလာပြီ။ format က acl aclname acltype argument ... acl aclname acltype "file" ... ဥပမာ acl mylan src 127.0.0.1/255.255.255.255 mylan သည် acl နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ src ဆိုတဲ့ type ဟာ source ကို ပြောတာပါ။ argument ကတော့ 127.0.0.1 ကနေ netmask 255.255.255.255 အထိလို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ type များ ACL name Refers to src source IP address any client connection dst destination IP address in any con nection srcdomain reverse lookup client IP dstdomain destination domain from URL time time component of the request proxy_auth used for proxy authentication ဥပမာ ပုံစံများ acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl localnet src 192.168.10.0/255.255.255.0acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network (or )acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network (or)acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network #acl SSL_ports port 443acl Safe_ports port 80 # httpacl Safe_ports port 21 # ftpacl Safe_ports port 443 # httpsacl Safe_ports port 70 # gopheracl Safe_ports port 210 # waisacl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered portsacl Safe_ports port 280 # http-mgmtacl Safe_ports port 488 # gss-httpacl Safe_ports port 591 # filemakeracl Safe_ports port 777 # multiling httpacl CONNECT method CONNECTတစ်ကယ်လို့သာ proxy server ကို username နဲ့စကား၀ှက်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့ authentication type တစ်ခုခုကို သုံးရပါတယ်။squid ဟာ authentication လုပ်ဖို့ ပြင်ပ program တစ်ခုခုကိုအသုံးချပါတယ်။ NCSA: NCSA style flat file containing username and encrypted password PAM: Use the password authentication module on the machine SAMBA: Authenticate againstaWindows NT oraSamba server LDAP: Authenticate against information from an LDAP tree NTLM: Multidomain NTLM authentication YP: Authenticate using NIS configuration ကိုလည်းပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာ ncsa အတွက် c:/squid/etc/squid.pass က username and pasword ထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ပါ။ဒီဖိုင်ကို apache မှာပါတဲ့ htpasswd.exe နဲ့လုပ်ထားရပါတယ်။ လုပ်နည်းက apache/bin မှာရှိတဲ့ htpasswd.exe ကို c:\_squid\_sbin\_ အောက်ကို ကော်ပီပွားထားပါ။ပြီးရင် command line ကနေ sbin အောက်ကို cd c:\_squid\_sbin နဲ့ပြောင်းပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် squid.pass ဖိုင်ကို create ဖို့အတွက် -c ကို သုံးပါတယ်။ --------------------------------------------------------------------------------------cmd> htpasswd -c "C:\_squid\_etc\_squid.pass username userpassword-----------------------------------------------------------------------------------------နောက်တစ်ကြိမ် တစ်ခြားသူကို ပေါင်းချင်ရင် -----------------------------------------------------------------------------------------------cmd> cmd> htpasswd "C:\_squid\_etc\_squid.pass next_username next_userpassword----------------------------------------------------------------------------------------------ဒါဆိုရင် squid.pass ဆိုတဲ့ etc အောက်မှာ password ဖိုင်တစ်ခုရပါပြီ။ ဒါကို configuration file မှာ အသုံးပြုရပါမယ်။ program က ncsa_auth ကိုသုံးပြီး password ဖိုင်က squid.pass ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါစာကြောင်းက ကြေငြာပါတယ်။-------------------------------------------------------------------------------------auth_param basic program c:/squid/libexec/ncsa_auth c:/squid/etc/squid.pass-----------------------------------------------------------------------------------------------အပေါ်ကလို ဘယ်ဖိုင်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာလုပ်ပြီးရင် အဲဒီလူတွေရအောင် ထပ်လုပ်ပေးရပါတယ်။အောက်က စာသားတွေကတော့ proxy_auth လိုတဲ့ကြောင်းကို ပြောတာပါ။ ပြီးတော့ password နဲ့ ၀င်လာတဲ့သူကိုပဲ http_access allow password ကလက်ခံပါတယ်။ http_access deny all နဲ့ ကျန်တာကို deny လုပ်ထားပေးပါတယ်။-----------------------------------------------------------------------------------------------------ဥပမာ ပုံစံ acl ကို အရင်လုပ်ရပါတယ်။ ပြီး access လုပ်ရပါတယ်။acl password proxy_auth REQUIREDacl localnet src 192.168.1.0/255.255.255.0 or acl localnet src 10.0.0.0/255.255.255.0http_access deny !localnethttp_access allow passwordhttp_access deny all------------------------------------------------------------------------------------------------------[user name တစ်ခုချင်းဆီဆိုရင်လည်း အောက်မှာပါတဲ့အတိုင်း username တွေကိုရေးထားရပါမယ်။#acl aclname proxy_auth]------------------------------------------@Authorizing access to group--------------------------------------------4. acl ကို လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ဘယ် protocol ကို ဘယ် acl_name တွေက သုံးခွင့်ရှိလဲဆိုပြီး ကြေငြာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ http ကို allowed_hosts ဆိုတဲ့ ACL Name က သုံးမယ် ကျန်တဲ့ အိုင်ပီတွေကို ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် ဒီလိုရေး ။ခွင့်ပြုချင်တဲ့ အိုင်ပီကို အရင်ရေးဖိုရတော့ လိုပါတယ်။ http_access allow manager localhost http_access deny manager all http_access allow localnet http_access deny alluser name and password နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ acl တစ်ခု ထပ်ထည့်ပြီး အောက်ကဟာကို သုံးပါ။ထပ်ထည့်ရမယ့် acl ကေတော့ acl password proxy_auth REQUIRED ဖြစ်ပါတယ်။ http_access allow manager localhost http_access deny manager all auth_param basic program c:/squid/libexec/ncsa_auth.exe c:/squid/etc/squid.pass auth_param basic children5auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl2hours auth_param basic casesensitive off http_access deny !localnet http_access allow localhost http_access allow password http_access deny all ------------------------------@declaration of host name-------------------------------5. မိမိ run နေတဲ့ host နာမည်ကို visible_hostname မှာ ထည့်ပါ။ visible_hostname ကိုရှာပြီး ပြောင်းပါ။ ဥပမာ visible_hostname myanmarengineer.org-----------------------------adding email address-----------------------------6. cache_mgr မှာ မိမိအသုံးပြုမယ့် အီးမေးကို ထည့်ပါ။ cache_mgr ကို ရှာပြီး ပြောင်းပါ။ဥပမာ cache_mgr [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]------------------------------------@setting dns namesserver------------------------------------7. dns_nameservers ကို ထည့်ထားပေးပါ။mpt ADSL က တစ်မျိုး။ ipstar ဆိုတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါ။ ဥပမာ dns_nameservers 10.1.0.1 or dns_nameserver 203.70.72.200************************************@Running Squid services************************************9. minimum configuration ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ squid ကို run ရပါမယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် run ခြင်းဆိုပါက cache နေရာကို ဖန်တီးရမှာဖြစ်လို့ windows logo+R နှိပ်ပြီး run ကို ခေါ်ပါ။ cmd လို့ရိုက်ပြီး command prompt ကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် cd c:\_squid\_ command line ကနေ squid ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင် ပထမဆုံးအကြိမ် run ခြင်းဆိုပါက cache နေရာကို ဖန်တီးရမှာဖြစ်လို့ -z ဆိုတဲ့ option သုံးရပါမယ်။ cmd> squid -z အဲဒီအချိန်မှာ နည်းနည်းတော့ ကြာတတ်ပါတယ်။ folder တွေကို create လုပ်နေတဲ့အတွက်ပါ။ပြီးရင် squid ကို ရိုက်ပြီး အင်တာခေါက်ပါ။ cmd> squid squid သေသေချာချာအလုပ်မလုပ်ကို logs ဖိုဒါထဲက Logs ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ ဘူးဆိုရင်တော့ cmd line ကနေ squid လို့တန်းရိုက်ပြီး run ရုံပါပဲ။ တစ်ကယ်လို့ windows စတိုင်း squid ကို အလိုလို run ပြီးသားဖြစ်ချင်ရင်တော့ windows services lists မှာ ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ DNS lookup fail ဆိုရင် အောက်ကပုံးစံအတိုင်း သုံးပါ။ cmd> squid -D-------------------------------------------------------------------------------------------- @ windows service အဖြစ် install နည်း------------------------------------------------------------------------------------------------- command line ကနေပြီး squid -i -n "Squid" ဆိုပြီးရိုက်ပြီး enter ခေါ်ပါ။ vista/windows7 မှာဆိုရင်တော့ c:\_squid\_sbin\_squid.exe ကို right click ထောက်ပြီး comatiblity မှာ run as administrator ကို အမှန်ခြစ်ထားဖို့တော့လိုပါမယ်။ -i က အင်စတော option ပါ။ -n က service name ပါ။ -n "Squid" ဆိုရင် Squid ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ windows service မှာ ပေါင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ -n မပါဘဲလည်းရပါတယ်။ squid -i ဆိုရင် default အနေနဲ့ Squid ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပဲ ပေါင်းထည့်မှာပါ။ cmd> squid- iသို့မဟုတ် cmd> squid- i -n "Squid"Uninstall: မယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းရိုက်။squid -r ************************************ရေးတဲ့လူကရေးခါးတဲ့:P akselite September 2009 edited September 2009 Registered Users [quote=yaeloeaye;57970]squid proxy server ဆိုတော cache လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ transparent ၇တယ်။ access and deny လည်းရတယ်။ multi instance လေး၇တဲ့ application တစ်ခုပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများ။ main server ကြိးတေမှာမြင်ရမှာပါ။ squid ကိုပဲ gateway အဖြစ်သုံးကြပါတယ်။ များအားဖြင့် networking နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဒါကို လုပ်ခိုင်းကြပါတယ်။ mpt က adsl ကိုလည်း proxy server ခံချင်တယ်။ ipstar ကိုလည်း server ခံချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ ။ဒါကို သုံးနိုင်ပါတယ်။တစ်ချီု့အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ရုံးတွေ industry တွေ မှာ မလုပ်တတ်ကြလို့ squid ကို run နိုင်ဖို့အတွက် ပိုက််ဆံပေးပြိး လုပ်ခိုင်းရပါတယ်။ကျနော်ဒီနေရာမှာ မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့နည်းရယ် မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်။ အလွယ်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် software ပါ ရေးပေးထားပါတယ်။ start and stop လုပ်ရုံပါပဲ။ ဒီပို့စ်မှာတော့ manually လုပ်နည်းကို တစ်ဆင့်ချင်းပြောသွားပါ့မယ်။နောက်ပို့စတွေမှာ ကျနော်ကိိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ software ကို တင်ပေးပါ့မယ်။##########################################################squid installing and configuration by [email="[email protected]"][email protected][/email]#www.myanmarenginer.org#ရေခါး@mef#############################################____________________________________________________________________________________________________ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ squid installing and configuration +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++___________________________________________________________________________________________________=========================================== installation squid proxy server===========================================ိdownload လုပ်၇န် squid.2.7 stable6version1. Squid folder ကို အရင် နေရာချ။ c:\_squid ။ space ခြားတဲ့ နေရာမှာ မထားပါနဲ့။ ဥပမာ (မသုံးရန်) c:\_my proxy\_squid ။2. Etc folder ထဲမှ squid.conf.default ဖိုင်ကို ကော်ပီအရင်ပွားထားပြီးမှ squid.conf သို့ပြောင်း။3. Etc folder ထဲမှ mime.conf.default ဖိုင်ကို ကော်ပီအရင်ပွားထားပြီးမှ mime.conf သို့ပြောင်း။3. Etc folder ထဲမှ cachemgr.conf.default ဖိုင်ကို ကော်ပီအရင်ပွားထားပြီးမှ cachemgr.conf သို့ပြောင်း။squid.conf.default ==> squid.conf mime.conf.default ==> mime.conf cachemgr.conf.default ==> cachemgr.conf ------------------------------------------@creating swap folder--------------------------------------------4. Var folder ထဲမှာ cache ဆိုပြီး ဖိုဒါဆောက်ပေး။=================================================== configuration squid proxy server==================================================== squid.conf ဖိုင်ကိုconfiguration စလုပ်။ # ကို ရှေ့က ခံထားရင် အဲဒါဟာ comment ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ effect မှ မရှိပါဘူး။-------------------------------@setting squid service port------------------------------------1. Http_port ကို ထည့်ပါ။ squid က ဒီ port နဲ့ run နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ default ကတော့ format port [options] hostname:port example http_port 3128 ဒီအတိုင်း မထားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ 3128 နေရာမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ port ကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ http_port 3177lan ကိုချိတ်ထားတဲ့ network card ရဲ့အိုင်ပီက 192.168.0.1 ဆိုရင်http_port 192.168.0.1:3177 ဆိုပြီးထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ security reson ပေါ့။-----------------------------------------@adding cache directory-----------------------------------------2. Cache directory နေရာကို ညွှန်ပြ။ cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 100 16 256 ကဲ့သို့သော line ကို မိမိကွန်ပျုတာရှိ သက်ဆိုင်သော နေရာကို ပြောင်းပေး။100 နေရာသည် file system တွင် 100 mega bytes ယူကြောင်းကြေငြောခြင်းဖြစ်တယ်။ 16 ဖိုဒါဆောက်။ 256 sub folder ထပ်ဆောက်ကြောင်းပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်။ \_ ကို မသုံးပါနဲ့။ / ကို သုံးပါ။ ဥပမာ။ cache_dir c:/squid/var/cache သို့ပြောင်း။--------------------------------------------------@making access control lists (acl)--------------------------------------------3. Acl (access contorl lists)ကို လုပ်ပေးရန်လိုလာပြီ။ format က acl aclname acltype argument ... Acl aclname acltype "file" ... ဥပမာ acl mylan src 127.0.0.1/255.255.255.255 mylan သည် acl နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ src ဆိုတဲ့ type ဟာ source ကို ပြောတာပါ။ argument ကတော့ 127.0.0.1 ကနေ netmask 255.255.255.255 အထိလို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ type များ acl name refers to src source ip address any client connection dst destination ip address in any con nection srcdomain reverse lookup client ip dstdomain destination domain from url time time component of the request proxy_auth used for proxy authentication ဥပမာ ပုံစံများ acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl localnet src 192.168.10.0/255.255.255.0acl localnet src 10.0.0.0/8 # rfc1918 possible internal network (or )acl localnet src 172.16.0.0/12 # rfc1918 possible internal network (or)acl localnet src 192.168.0.0/16 # rfc1918 possible internal network #acl ssl_ports port 443acl safe_ports port 80 # httpacl safe_ports port 21 # ftpacl safe_ports port 443 # httpsacl safe_ports port 70 # gopheracl safe_ports port 210 # waisacl safe_ports port 1025-65535 # unregistered portsacl safe_ports port 280 # http-mgmtacl safe_ports port 488 # gss-httpacl safe_ports port 591 # filemakeracl safe_ports port 777 # multiling httpacl connect method connectတစ်ကယ်လို့သာ proxy server ကို username နဲ့စကား၀ှက်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့ authentication type တစ်ခုခုကို သုံးရပါတယ်။squid ဟာ authentication လုပ်ဖို့ ပြင်ပ program တစ်ခုခုကိုအသုံးချပါတယ်။ ncsa: Ncsa style flat file containing username and encrypted password pam: Use the password authentication module on the machine samba: Authenticate againstawindows nt orasamba server ldap: Authenticate against information from an ldap tree ntlm: Multidomain ntlm authentication yp: Authenticate using nis configuration ကိုလည်းပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာ ncsa အတွက် c:/squid/etc/squid.pass က username and pasword ထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ပါ။ဒီဖိုင်ကို apache မှာပါတဲ့ htpasswd.exe နဲ့လုပ်ထားရပါတယ်။ လုပ်နည်းက apache/bin မှာရှိတဲ့ htpasswd.exe ကို c:\_squid\_sbin\_ အောက်ကို ကော်ပီပွားထားပါ။ပြီးရင် command line ကနေ sbin အောက်ကို cd c:\_squid\_sbin နဲ့ပြောင်းပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် squid.pass ဖိုင်ကို create ဖို့အတွက် -c ကို သုံးပါတယ်။ --------------------------------------------------------------------------------------cmd> htpasswd -c "c:\_squid\_etc\_squid.pass username userpassword-----------------------------------------------------------------------------------------နောက်တစ်ကြိမ် တစ်ခြားသူကို ပေါင်းချင်ရင် -----------------------------------------------------------------------------------------------cmd> cmd> htpasswd "c:\_squid\_etc\_squid.pass next_username next_userpassword----------------------------------------------------------------------------------------------ဒါဆိုရင် squid.pass ဆိုတဲ့ etc အောက်မှာ password ဖိုင်တစ်ခုရပါပြီ။ ဒါကို configuration file မှာ အသုံးပြုရပါမယ်။ program က ncsa_auth ကိုသုံးပြီး password ဖိုင်က squid.pass ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါစာကြောင်းက ကြေငြာပါတယ်။-------------------------------------------------------------------------------------auth_param basic program c:/squid/libexec/ncsa_auth c:/squid/etc/squid.pass-----------------------------------------------------------------------------------------------အပေါ်ကလို ဘယ်ဖိုင်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာလုပ်ပြီးရင် အဲဒီလူတွေရအောင် ထပ်လုပ်ပေးရပါတယ်။အောက်က စာသားတွေကတော့ proxy_auth လိုတဲ့ကြောင်းကို ပြောတာပါ။ ပြီးတော့ password နဲ့ ၀င်လာတဲ့သူကိုပဲ http_access allow password ကလက်ခံပါတယ်။ http_access deny all နဲ့ ကျန်တာကို deny လုပ်ထားပေးပါတယ်။-----------------------------------------------------------------------------------------------------ဥပမာ ပုံစံ acl ကို အရင်လုပ်ရပါတယ်။ ပြီး access လုပ်ရပါတယ်။acl password proxy_auth requiredacl localnet src 192.168.1.0/255.255.255.0 or acl localnet src 10.0.0.0/255.255.255.0http_access deny !localnethttp_access allow passwordhttp_access deny all------------------------------------------------------------------------------------------------------[user name တစ်ခုချင်းဆီဆိုရင်လည်း အောက်မှာပါတဲ့အတိုင်း username တွေကိုရေးထားရပါမယ်။#acl aclname proxy_auth]------------------------------------------@authorizing access to group--------------------------------------------4. Acl ကို လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ဘယ် protocol ကို ဘယ် acl_name တွေက သုံးခွင့်ရှိလဲဆိုပြီး ကြေငြာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ http ကို allowed_hosts ဆိုတဲ့ acl name က သုံးမယ် ကျန်တဲ့ အိုင်ပီတွေကို ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် ဒီလိုရေး ။ခွင့်ပြုချင်တဲ့ အိုင်ပီကို အရင်ရေးဖိုရတော့ လိုပါတယ်။ http_access allow manager localhost http_access deny manager all http_access allow localnet http_access deny alluser name and password နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ acl တစ်ခု ထပ်ထည့်ပြီး အောက်ကဟာကို သုံးပါ။ထပ်ထည့်ရမယ့် acl ကေတော့ acl password proxy_auth required ဖြစ်ပါတယ်။ http_access allow manager localhost http_access deny manager all auth_param basic program c:/squid/libexec/ncsa_auth.exe c:/squid/etc/squid.pass auth_param basic children5auth_param basic realm squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl2hours auth_param basic casesensitive off http_access deny !localnet http_access allow localhost http_access allow password http_access deny all ------------------------------@declaration of host name-------------------------------5. မိမိ run နေတဲ့ host နာမည်ကို visible_hostname မှာ ထည့်ပါ။ visible_hostname ကိုရှာပြီး ပြောင်းပါ။ ဥပမာ visible_hostname myanmarengineer.org-----------------------------adding email address-----------------------------6. Cache_mgr မှာ မိမိအသုံးပြုမယ့် အီးမေးကို ထည့်ပါ။ cache_mgr ကို ရှာပြီး ပြောင်းပါ။ဥပမာ cache_mgr [email="[email protected]"][email protected][/email]------------------------------------@setting dns namesserver------------------------------------7. Dns_nameservers ကို ထည့်ထားပေးပါ။mpt adsl က တစ်မျိုး။ ipstar ဆိုတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါ။ ဥပမာ dns_nameservers 10.1.0.1 or dns_nameserver 203.70.72.200************************************@running squid services************************************9. Minimum configuration ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ squid ကို run ရပါမယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် run ခြင်းဆိုပါက cache နေရာကို ဖန်တီးရမှာဖြစ်လို့ windows logo+r နှိပ်ပြီး run ကို ခေါ်ပါ။ cmd လို့ရိုက်ပြီး command prompt ကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် cd c:\_squid\_ command line ကနေ squid ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင် ပထမဆုံးအကြိမ် run ခြင်းဆိုပါက cache နေရာကို ဖန်တီးရမှာဖြစ်လို့ -z ဆိုတဲ့ option သုံးရပါမယ်။ cmd> squid -z အဲဒီအချိန်မှာ နည်းနည်းတော့ ကြာတတ်ပါတယ်။ folder တွေကို create လုပ်နေတဲ့အတွက်ပါ။ပြီးရင် squid ကို ရိုက်ပြီး အင်တာခေါက်ပါ။ cmd> squid squid သေသေချာချာအလုပ်မလုပ်ကို logs ဖိုဒါထဲက logs ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ ဘူးဆိုရင်တော့ cmd line ကနေ squid လို့တန်းရိုက်ပြီး run ရုံပါပဲ။ တစ်ကယ်လို့ windows စတိုင်း squid ကို အလိုလို run ပြီးသားဖြစ်ချင်ရင်တော့ windows services lists မှာ ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ dns lookup fail ဆိုရင် အောက်ကပုံးစံအတိုင်း သုံးပါ။ cmd> squid -d-------------------------------------------------------------------------------------------- @ windows service အဖြစ် install နည်း------------------------------------------------------------------------------------------------- command line ကနေပြီး squid -i -n "squid" ဆိုပြီးရိုက်ပြီး enter ခေါ်ပါ။ vista/windows7 မှာဆိုရင်တော့ c:\_squid\_sbin\_squid.exe ကို right click ထောက်ပြီး comatiblity မှာ run as administrator ကို အမှန်ခြစ်ထားဖို့တော့လိုပါမယ်။ -i က အင်စတော option ပါ။ -n က service name ပါ။ -n "squid" ဆိုရင် squid ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ windows service မှာ ပေါင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ -n မပါဘဲလည်းရပါတယ်။ squid -i ဆိုရင် default အနေနဲ့ squid ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပဲ ပေါင်းထည့်မှာပါ။ cmd> squid- iသို့မဟုတ် cmd> squid- i -n "squid"uninstall: မယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းရိုက်။squid -r ************************************ရေးတဲ့လူကရေးခါးတဲ့:pကောင်းတယ် ဗျ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ.... phoethat October 2009 edited October 2009 Registered Users ွှThanks လေးပေးပြီးပါပြီ....အားမရလို့:Dတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ:D Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla